६० बर्ष अघि बीपी र माओ बीचमा मध्यरातमा भएको वार्ताको पुर्णपाठ « Bikas Times
६० बर्ष अघि बीपी र माओ बीचमा मध्यरातमा भएको वार्ताको पुर्णपाठ
नेपालका प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइराला चीन भ्रमणमा थिए । यस क्रममा उनले चिनिया नेता माओसंग भेट्ने चाहना राखे समय मिलेको थिएन । १८ मार्च १९६० को कुरा हो । दिनभरिको घुमाइबाट थाकेका थिए सबै । होटल पुग्ने बित्तिकै कपडा फेरेर सुत्ने तरखरमा रहेको बेला ढोकामा ढकढक आवाज सुनियो । खोल्दा त ‘माओ त्से तुङले भेट्न खोजेका छन्’ भन्ने खबर लिएर मानिस पो आएका छन् ।” बीपीले भने, “म थाकेको छु । अलिकति ड्रिङ्क्स पनि गरेको छु ।” बोलाउने चिनियाँहरुले भने, “केही फरक पर्दैन ।” बीपी त्यो दिनको घटनाबारे भन्छन्, “अब त भेट्नै प(यो भनेर लुगा लगाए । ओभरकोट लगाउन खोजें । उनीहरुले भने, ‘पर्दैन, यही होटलमा अर्को खण्डमा उनी बसेका छन् ।’ मध्यरातमा माओसँग भेट भयो । त्यही बेला माओले सगरमाथालाई दुवै देशको साझा चुचुरो बनाउन प्रस्ताव गरे । माओले भने, ‘यसलाई मितेरी चुचुरो बनाऊँ ।’” त्यस दिन वीपी र माओबीच भएको ऐतिहासिक वार्ता चीनको परराष्ट्र मन्त्रालयले आफ्नो पुस्तक ‘माओत्सेतुङ अन डिप्लोमेसी’ मा प्रकाशित गरेको छ।
माओ : भारतसँग हाम्रो सम्बन्ध खराब छ। तर चिन्ता नगर्नुस्। चाँडै यो समाप्त हुनेछ। हामी दुवैको साझा स्वार्थ छ, किनभने हामी दुवै अविकसित राष्ट्र हौँ। हामीले भारतमा आक्रमण गरेको भन्ने आरोप झुठो हो। हामी अर्काको जमिन एक इन्च पनि चाहन्नौँ। हामीसँग ९६ लाख वर्ग किलोमिटरको विशाल क्षेत्रफल छ। जसको ठूलो हिस्सा उपयोगविहीन छ। आफ्नो देश चाहिँ राम्ररी सञ्चालन नगर्नु अनि अरुको जमिन खोस्नु भनेको अपराध हो। के हामीले नेपालमा आक्रमण गरेका छौँ त ? हामीलाई नेपालको जमिन एक इन्च पनि चाहिँदैन। के हामी सीमा सन्धिमा हस्ताक्षर गरेर सीमा चिन्ह राख्न सक्छौ ?
बीपी : सक्छौँ। यसबारे मैले प्रधानमन्त्री चाउ एन लाइसँग छलफल गरेको छु।
वीपीस् आधिकारिक सीमा चिन्ह आवश्यक छ।
बीपी : यो विचार गर्न लायक कुरा हो।
वीपीस् हाम्रो कुराकानीमा प्रधानमन्त्री चाउ एन लाइले मैत्री सन्धिको मस्यौदा अघि सार्नुभएको थियो। त्यो मस्यौदालाई पहिले हामीले मन्त्री परिषदबाट पास गराउनुपर्छ। त्यसमा केही संशोधन हुनसक्छ। सायद यसमा प्रधानमन्त्री चाउ एन लाइको अप्रिल अन्तिममा भारतपछिको नेपाल भ्रमणका क्रममा काठमाडौँमा हस्ताक्षर हुनसक्छ।
बीपी : हामी धेरै मान्छे पठाउँदैनौँ किनभने हामी धेरैको खर्च धान्न सक्दैनौँ।
बीपी : होइन। हामी दुई वर्ष अगाडि चाहिँ त्यो राजमार्ग बनाउन चाहन्थ्यौँ। तर कोषको अभावका कारण काम अघि बढ्न सकेन। अहिले सोभियत संघका प्राविधिकहरुले पूर्व–पश्चिम राजमार्गको सर्वेक्षणमा सघाइरहेका छन्।
बीपी : होइन। हामी नेपाल र तिब्बतबीचको हिमाल नाघेर आउन सक्छौँ। तर त्यो औपचारिक मार्ग होइन।
बीपी :हाम्रो देशमा हामीले आर्थिक विकासको सम्भावना भएको क्षेत्रमा सडक बनाइरहेका छौँ। देशभर हामीले ९ सय माइल ९१३०० किमी० सडक निर्माणको योजना बनाएका छौँ।
बीपी : मैले जवाहरलाल नेहरु र प्रधानमन्त्री चाउ एन लाइलाई वार्ताका लागि हाम्रो राजधानी काठमाडौँमा निम्त्याएको थिएँ। तर उहाँहरु आउन सक्नुभएन।
अहिले बर्माका प्रधानमन्त्रीले हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई रंगुन बोलाएका छन्। महामहिमले पनि आफ्नो देशमा बोलाउनु भएको छ। त्यसैले प्रधानमन्त्री चाउ एन लाइ पहिले बर्मा जानुहुन्छ, अनि भारत गएर त्यहाँका प्रधानमन्त्रीसँग वार्ता गर्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईंको देशमा जानुहुन्छ। उहाँले यसपटक भ्रमण गर्ने चौथो देश चाहिँ कम्बोडिया हो, जसले हामीलाई अनेक पटक निम्ता गरिसकेको छ। उहाँ पाँचौँ देश पनि जानुहुन्छ, त्यो हो चि मिन्ह ९हो चि मिन्ह भियतनाम कम्युष्टि पार्टीका संस्थापक हुन्, जो पछि भियतनामको निर्वाचित राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री भए० को देश हो। एकैसाथ पाँच देशको भ्रमण। त्यसैले गतवर्षको चीनविरोधी तरंग बिस्तारै शान्त हुँदैछ।
करिब एक वर्षजति भारतसँग हाम्रो झगडा भयो। तर हामी अझै पनि मित्र हौँ। साथीसाथी, पतिपत्नी र दाजुभाइबीच प्रायः झगडा भइरहन्छ। तपाईं, बर्मा, सिलोन ९अहिलेको श्रीलंका० र कम्बोडियासँग हाम्रो झगडा छैन। संसारमा एक देशसँग मात्रै हाम्रो गम्भीर झगडा छ, त्यो हो( अमेरिका। उसले हाम्रो ताइवान कब्जा गरेर हामीलाई नै ‘आक्रमणकारी’ भन्छ। हामीले पनि उसलाई आक्रमणकारी भन्नुपर्छ। हामीले अमेरिकाको जमिन कहीँ एक इञ्च पनि कब्जा गरेका छैनौँ। यद्यपि चीन र होनोलुलुबीच मिडवे आइल्याण्ड छ। न त हामीले जापान नै कब्जा गरेका छौँ। मलाई थाहा छैन, हामी आक्रमणकारी कसरी भयौँ।
बीपी : त्यस्तो भएको छैन, त्यसैले त हामीले वक्तव्य जारी गर्यौं।
बीपी : नेपाल–चीन सीमाको विषयमा अझै फरक मत छन्। हाम्रो दृष्टिमा विगत ५० वर्षको ऐतिहासिक परिस्थितिलाई आधार मान्दा चार स्थानमा विवाद छ। अब विवाद टुंग्याउने समय हो।
बीपी : प्रधानमन्त्री चाउ एन लाइसँगको कुराकानीमा हामीले अनेकौँ सिद्दान्तको कुरा गर्यौं। पहिलो, परम्परागत रुपमा स्वीकार्य विद्यमान सीमा रेखा कोर्ने, दोस्रो, सीमाको दुवैतर्फबाट क्षेत्राधिकारीको व्यवहारिक परिस्थिति मूल्यांकन गर्ने, तेस्रो, केही स्थानमा विवाद समाधान गर्ने र विवाद समाधान हुन नसके संयुक्त समितिमा हस्तान्तरण गर्ने।
बीपी : हामीबीचका खासखास स्थानमा विवाद भएकाले यी सिद्दान्तहरु ठीक छन्। विवादले हामीलाई असहज बनाएको छ। हाङझाउ जाँदा मैले प्रधानमन्त्री चाउ एन लाइलाई भनेँ, म असहज मनस्थिति लिएर हाङझाउ आएको छु। प्रधानमन्त्री चाउले मलाई पूर्ण रुपमा सहज महसुस गर्न भन्नुभयो।
बीपी : यहाँ आउनुअघि मैले प्रधानमन्त्री ने विन ९बर्माका तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री० लाई भेटेको थिएँ। उहाँले अध्यक्ष माओ र प्रधानमन्त्री चाउ एन लाइसँग स्पष्टसँग कुरा गर्न भन्नुभएको थियो। त्यसैले मैले यी सबै कुराबारे खुलेर बोलेको छु।
बीपी : हाल विवादित स्थानहरु तपाईंका लागि महत्वपूर्ण छैनन्। तर हाम्रो लागि ती महत्वपूर्ण छन्। यो प्रतिष्ठको विषय हो।
बीपी : अर्को पनि प्रश्न छ, भावनाको प्रश्न। यसलाई हामी सगरमाथा भन्छौँ, पश्चिमाहरु एभरेस्ट भन्छन्, तपाईंहरु चोमोलोङ्मा भन्नुहुन्छ। यो स्थान सँधै हाम्रो सीमाभित्र छ। तर प्रधानमन्त्री चाउ एन लाइले यो तपाईंहरुको सीमाभित्र पर्छ भन्नुभयो।
बीपी : यो भावनात्मक प्रश्न हो।
बीपी : हिमालको चुचुरो चाहिँ ?
सूर्यप्रसाद उपाध्याय : त्यो कसले गर्ने?
सूर्यप्रसाद उपाध्याय : विगतमा हिमाल आरोहीहरुले नेपाली भिसा लिनुपर्थ्यो।
बीपी: अरु विवाद पनि छन्।
बीपी: हाम्रो त केही वर्ग किलोमिटर मात्रै हो।
बीपी: ठीक छ। अन्य पाँच विवादित स्थान छन्। जसमध्ये तीन स्थान मुख्य छन्।
बीपी: बेइजिङको वार्तामा समाधान गर्न सकिएन भने यो कुरालाई हामी तपाईंसामु कसरी राख्न सक्छौँ?
बीपी: हामी पनि आशावादी छौँ।
बीपी: सूर्यप्रसाद उपाध्याय: हो।
(नेपाल चीन सम्वन्धमा ऐतिहासिक बार्ताको नेपाली अनुवाद हामीले २०७६ असोज १९ को www.nepalkhabar.com बाट लिएका हौं ।)